साहित्य – Tufan Media News
एकै चोटि ३ सन्तान र श्रिमतिको ला’श पोलेका ९० बर्षिय एक्लो बुवाको रुवाउने कथा(भिडियो)
थाने कुमाल अहिले उमेरेको हिसाबमा ९० बर्षका भए । उनले आशा अब यो ढंगबाट छोडे कि जिन्दगीमा केहिपनि पाउन बाकि नरहेको र केही नभएको पनि उनी सहजै स्विकार्छन् । घरमा छानो छैन नत बिजुलि बत्ति नै छ नत पानिनै छ तर पनि उनी बाच्ने हिम्मत राख्छन् । बुवाको शरिरमा थोत्रा लुगा ती पनि च्यातिएका र निकै मैला देखिन्छन् । खुट्टाभरि घा*उ पा...
मन परेकी केटी भाउजु भएर आएपछि …
उनीहरुले मलाई बताएका त होईनन् तर उनीहरुको हाउभाउ र व्यवहार मेरै जस्तो भएकाले मलाई अलि सन्तोष मिलेको थियो कि संसारमा म मात्र हैन मजस्ता अरु पनि हुन्छन् भनेर ।एक दुई गर्दा गर्दै जिन्दगीको ३० औ बसन्त पार गरिसके मैले । यद्यपी बसन्त त मेरो जीवनमा बाल्यकाल बाहेक कहाँ आयो र ! सदैव हिउँ परिरयो, सिरेटो चलिरहर्याे मेरो जीवनमा अन...
हिउँ खेल्न गएका दुई किशोर ११ दिनपछि मृ’त अवस्थामा फेला
काठमाडौ :जाडो महिनामा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्ने हिउँले लोभ्याउने गर्छ । त्यही हिउँको सुन्दरताले गोरखा वारपाकका दुई युवको ज्यान गएको छ । हिउँ खेल्न गएका दुई युवा १० दिन पछि मृत फेला परेका छन् । परिवारका सदस्यले उनीहरु कतै घुम्न गएका होलान् भन्ने ठानेर प्रहरीलाई ढिलो खबर गरेका थिए । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–१ तिम्र...
मेरो श्रीमान् सधैं उग्र स्वभावको र अहंकारी प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ। छोरी र परिवारका सदस्यहरूको कारणले मैले उसलाई कहिल्यै छोडिन। हामी दुवैले एकअर्कासँग विवाह गर्न बा’ध्य भयौं । किनभने हाम्रा बुवाहरूबीच पुरान ब्यापारी र व्यापारमा पाटन रि भएका कारण उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो । यो मेरो परिवारमा चलिरहेको विवाहको घटना हो...
नयाँ श्रीमान चाहियो !
म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो । घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले...
देश र जनताका लागि फाँ’सी चढेका तिमी वीरहरुलाई सहिद दिवसको शुभकामना
देशको माटो छातीमा राखेर तिमी सदाका लागि निदाएपछी शासन फेरियो व्यक्ती र राणा फेरिए तर उस्तै छ देशको हालत उस्तै छ गरिब जनताको समस्या सहिदका र'गतको मुल्य कुर्सीसगँ साटेकाहरुले लडाइ र आ'न्दोलन आज पनि जारी नै राखेका छन् देशमा फरक यति हो ! तिमी सिङ्गो देश जोगाउन लड्यौ आज कुर्सी जोगाउन ल'ड्दैै छन् तिमी तानाशाहको वि'रुद...
मोटरसाइकल दु’र्घटना हुँदा चालकको मृ’त्यु
सिरहा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ स्थित दुर्गा मन्दिर नजिक आज साँझ मोटरसाइकल दु'र्घटना हुँदा एक युवकको मृ'त्यु भएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको स ७ प १८५ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–११ निवासी २५ वर्षीय सञ्जय साहको मृ'...
छत्र मैनाली/कोलम्बिया – अधिकांश नेपाली युवाले सपनाको मुलुक अमेरिका जाने सपना देखेका हुन्छन्, जुन अस्वभाविक होइन । दुई दशकयता डिभी चिट्ठाबाट हजारौं नेपाली अमेरिका पुगिसकेका छन् । अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट अमेरिका पुगेका नेपालीको संख्या पनि निक्कै छ। त्यही भएर पनि नेपाली जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि अमेरिका छिर्न लालयित हु...
श्रीमानको ह’त्या गरेको आ’रोपमा श्रीमतीसहित चार जना प’क्रा’उ
कैलाली – कैलालीको धनगढीमा एक जनाको ह'त्या भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–७ का अन्दाजी २५ वर्षीय रमेश चौधरीको ह'त्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । रमेशको ह''त्याको आशंकामा प्रहरीले श्रीमती अमृता चौधरीसहित चार जनालाई प'क्राउ गरेको छ । आज बिहानै घरदेखि झण्डै ७ सय मिटर टाढा खुटिया खोलाको छेउमा चौधरीको श'व...
गर्न नसकिएको प्रेम – करण चापागाईं
तिमी अन्जान नै ठिक थियौ, तिमिलाइ नदेखेकै ठिक थियो,किन थाहा छ जतिबेला तिमिलाइ देखे मैले अरु सोच्नै बिर्सिये,तिमिलाइ हेरेर म घन्टौ टोलाइदिन थाले,थाहा छ म अरु कसैको हु तर तिमी बाट नजर हटाउन मन ले दिदैन बस तिमिलाइ हेरिराख्न भन्छ।तिमिलाइ नचिनेकै ठिक थियो ,तिमी सङ नजिक नभएको नै ठिक थियो। जसरी दोबाटोमा भेट भएका मान्छे अन्जान...